ကျေးဇူးပြုပြီး ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » ကျေးဇူးပြုပြီး …..
ကျွန်တော့်ရဲ့ nickname က white ပါ။ post တစ်ခုတင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ အခက်အခဲကို gazette ထဲမှ သူငယ်ချင်းများ တတ်နိုင်ရင် ဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လောလောဆယ်က gazette ထဲမှာ မြန်မာစာ ရိုက်လို့မရတော့တဲ့ အတွက်ပါ။ စာရေးရင်းနဲ စကားလုံးမှားခဲ့ရင် တော်တော်လေးပြင်ရတာ ကြာလို့ပါ။ တိုက်ရိုက် စာရိုက်ထည့်လို့မရတဲ့အတွက် comment ရေးဖို့တောင် (၂)ဆင့် သုံးနေရပါတယ်။ gtalk နဲ့ အခြားနေရာတွေမှာတော့ မြန်မာစာကို ရိုက်လို့ ရပါတယ်။ အခုတောင် word မှာ စာရိုက်ပြီး copy-paste လုပ်ပြီး ဒီမှာ post အနေနဲ့ တင်တာပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဝိုင်းပြီး ဖြေရှင်းပေးကြပါဦးဗျာ ………….. ။
ဘာ Browser သုံးတာပါလဲ..။
Firefox ဆိုရင်တော့ .. အောက်ကလင့်မှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီး အဲဒီအတိုင်းလုပ်ပါ။
Firefoxမဟုတ်ရင် … Firefoxကို စက်ထဲထည့်လိုက်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် တခြား browser တွေသုံးရင် မြန်မာစာတွေမပေါ်ပါဘူး ။ safari ပဲဖြစ်ဖြစ် google crome ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီလို လေးထောင့်လေးတွေပေါ်နေတတ်တယ် ။ စာက ဖတ်လို့ရတယ် ကိုယ့် post ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ် Mozilla နဲ့ပဲ အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတာပါ ။
လက်စနဲ.ကျွန်တော်.ကိုလည်းကူညီကြပါအုံးဗျာပို.စ်တင်ချင်တာ အရင်လိုပုံစံမဟုတ်တော.ပါဘူး မူလစာမျက်နှာက။းဒါ.မို. new post ရှာလို.မတွေ.လို.ပါ Mozilla Firefox သုံးပြီးဖွင်.တာပါ။
မေးထဲပို.မယ်ဆိုလည်း narziparty2009@gmail.com ပါ
လိုချင်တာများမတွေ့ရင်ဘေးနားက ကလေးတွေကို အကူအညီတောင်းလိုက်ရင်
ကြုံတုန်းပြောလိုက်ပါအုံးမယ် ခုခေတ်လူငယ်တွေထဲမှာ လူတော်တွေလဲ အင်တာနက်ဆို်င်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ။
gazette homepage ရဲ့ ညာဘက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ nickname အောက်မှာ site admin ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို click လုပ်လိုက်ရင် အရင်လိုပုံစံအတိုင်း ပြန်သုံးလို့ ရပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ gazette မှာ myanmar font ခုထိရိုက်လို့မရသေးလို့ gtalk မှာရေးပြီး ဒီမှာ copy-paste လုပ်နေရပါတယ်။
ဘကြီး ဝိုက် မရသေးရင်.. ဖြုျတ်ချပြီး အသစ်ပြန်တင်လိုက်..
ဆူးလေးရေ ……. ဘကြီး ဝိုက်ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးက ခေါ်လို့ မကောင်းပါဘူးကွယ်။ ဘကြီး ဝှိုက်ဆိုလဲတော်သေး ……… ဘကြီး ဝိုက်လို့ခေါ်တော့ ဘာကို ဝိုက်တာလဲ မေးနေမှ အခက်တွေ့နေမှာ။
ကိုဖြူလေးဆိုတဲ့ နာမည်လောက်ဆို အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ တော်ကြာ အသက်ခပ်ကြီးကြီး လူကြီးလို့ ထင်နေပါဦးမယ်။
ဒီနေ့တော့ mozilla firefox ကို update လုပ်ပြီး unicode ကိုလည်း ပြန်ပြီးအသက်သွင်းလိုက်လို့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
လွယ်ပါတယ်ဆူးရယ်။ သူ့ကို အဖြူလို့သာခေါ်လိုက်၊ အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ချင်ရင်တော့ BEDC ပေါ့။
ကိုကြောင်ကြီးရယ်၊ BEDC ထက်စာရင် သူ့ထက်ကောင်းတာတွေ ရွေးချယ်တာ ပိုသင့်တော်မှာပါ။ ခဏတာ အပန်းဖြေဖို့ ပြောတာနော်။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ BEDC အစွမ်း၊ အဆီစပ်အစွမ်း တွေနဲ့ နတ်ပြည်ရောက်ကုန်တာ မနည်းတော့ဘူးဗျ။
မရည်ရွယ်ပေမဲ့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ဘကြီး ဝိုက်ရယ်.. ဘယ်သူ မသိသိ.သိသိ.. ဘကြီး အသက် ဘကြီး သိတာမို့.. ဆူး အပိုတော့ ပြောတော့ပါဘူး.. ဘဘဖြူ လို့ပြောင်းခေါ်လိုက်တာ ပိုကောင်းမလားလို့..
IT အကြောင်းမသိရင် မေးကြနော်.. အားမနာနဲ့။
(IT outdated ဖြစ်တာနဲ့ အသက်တန်းသိတာပဲ။ ဟန်လုပ်ထားဦးမှ။)
တော်သေးတာပေါ့ မမေးမိတာ မမေးမိရင် အဘခေါ်ခံနေရအုံးမယ်။
ဘကြီးပေါက်က ဘာတွေ သိချင်လို့လဲ.. ဘာမှ ရေရေရာရာ ဖြေတတ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး.. ဘကြီးပေါက်လို့ ခေါ်ချင်လို့ မန်းလိုက်တာ.. ဟီးဟီး
အဘ လို့ အခေါ်ခံရတယ်ဆိုတာ နဲတဲ့ဂုဏ်မှတ်လို့ …. ဂုဏ်ယူကြပါ … ဗမာပြည်မှာ ဘယ်သူတွေကိုမှ အဘလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာ သိတယ်ဟုတ် ….
အဘနီ ကလည်း အဘ အခေါ်ခံရတာ တော်ယုံ အဆင့် မဟုတ်ဘူး.. သိတယ်ဟုတ်..